इरानले अन्तरिक्षमा पठायो क्षेप्यास्त्रमा तीन ओटा अनुसन्धान कार्गो - Arthatantra.com
इरानले अन्तरिक्षमा पठायो क्षेप्यास्त्रमा तीन ओटा अनुसन्धान कार्गो
तेहरान । इरानले अन्तरिक्षमा तीन ओटा अनुसन्धान कार्गो पठाएको छ । सन् २०१५ को आणविक सम्झौता व्युँताउने विषयमा इरान र पश्चिमेली देशहरुबीचको वार्ता अवरुद्ध भइरहेका बेला इरानले अन्तरिक्षमा कार्गो पठाएको हो । अन्तरिक्षको अनुसन्धान गर्न भन्दै उसले एउटा क्षेप्यास्त्रमा तीन ओटा अनुसन्धान उपकरण पठाएको हो । इरानको वायु फौजका प्रवक्ता अहमद हुसेनले भने, ‘यस अन्तरिक्ष अनुसन्धान अभियानमा पहिलो पटक क्षेप्यास्त्रमार्फत तीनओटा अनुसन्धान उपकरण पठाइएको छ ।’
मध्यपूर्वमा सबैभन्दा धेरै मिसाइल कार्यक्रम रहेको इरानले प्रक्षेपण गरेका भूउपग्रह पछिल्लो समयमा विफल भएका छन् । प्राविधिक समस्याका कारण ती क्षेप्यास्त्र विफल भएका हुन् ।
अमेरिकाले आफ्ना आणविक कार्यक्रम स्थगित गर्न जोड दिँदै आएको छ । सन् २०१८ मा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम प्रशासनले इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि इरानले आफ्ना आणविक कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिएको थियो ।
इरानको आणविक वार्ता निकै निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको यसै साता अमेरिकाले जनाएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति टम्पले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएमा मात्र आफूले आणविक कार्यक्रम रोक्ने इरानले बताउँदै आएको छ । वर्तमान राष्ट्रपति जोन बाइडेनले पनि इरानले आणविक कार्यक्रम त्याग्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
वि.सं.२०७८ पुस १६ शुक्रवार ०९:०१ मा प्रकाशित
अघिल्लाे कोभिडका कारण लकडाउन गरिएको सियान सहरमा खाद्यन्न अभाव
पछिल्लाे तराईमा बाक्लो हुस्सु, कुन विमानस्थलको भिजिबिलिटी कति ?
फेरि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, प्रतितोला कति पुग्यो ?
वि.सं.२०७८ माघ ५ बुधवार १३:०४
काठमाडौं । बुधवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ...
वि.सं.२०७८ माघ ४ मंगलवार १४:४१
काठमाण्डौं । विश्वमै पहिलो पटक लामो समय पानीमाथी पद्माशन गरेर...
वि.सं.२०७८ माघ ४ मंगलवार १०:५७
काठमाडौं । साताको तेस्रो कारोबार दिन सुनको मूल्य वृद्धि भएको...
फेरि बढयो सुनचाँदीको मूल्य, आज प्रतितोला कति पुग्यो ?
वि.सं.२०७८ माघ ३ सोमवार ११:३२
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सुनको मूल्य वृद्धि भएको...
माघ महिनाको पहिलो दिनमै घट्यो सुनचाँदीको मूल्य, प्रतितोला कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
वि.सं.२०७८ माघ २ आइतवार १२:२७
काठमाडौं । माघ महिनाको पहिलो कारोबार दिन सुनको मूल्यमा गिरावट...
पुस महिनाको अन्तिम कारोबार दिन बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, प्रतितोला कति पुग्यो ?
वि.सं.२०७८ पुस ३० शुक्रवार ११:१६
काठमाडौं । पुस महिनाको अन्तिम कारोबार दिन सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि...